Mahotera ePhuket akavhara zvakare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Mahotera ePhuket akavhara zvakare
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Hotera muPhuket pamwe chete nePattaya dziri kuvhara zvakare nekuda kweimwe COVID-19 kuvhuna muThailand.
Yechitatu wave we COVID-19 hutachiona huri kufamba kuburikidza neThailand.
Zvinotarisirwa kuti nekuvharwa uku, mitengo yekugara kwehotera icharamba iri mune imwechete manhamba kusvika Chivabvu.
Iyo chete tariro yevashanyi nemahotera mushonga wecoronavirus unobata hutachiona hwemombe - 70 muzana yevagari vari kudzivirirwa.
Thai Hotels Association (THA) Mutungamiri Marisa Sukosol Nonpakdee akataura musi waApril 23 kuti ichangoburwa coronavirus yakatapukira kwete kungobhadharisa dzimba chete, asi nzvimbo dzekudyira mahotera nenzvimbo dzemusangano. Mahotera chete ane nheyo dzakasimba dzemari kana avo vanowana rutsigiro rwemari kubva kumakambani evabereki ndivo vachakwanisa kurarama, akadaro.
Vashandisi vemahotera vaitarisira kumisikidza Songkran ine simba kupinda muna Chivabvu uye kukamhina mukudonha kwekushanyirwa kwekunze kunotarisirwa kutangazve. Asi wave wechitatu wabvisa chero mukana wekuita mari gore rino, Marisa akadaro.
Vashoma inopfuura hafu yemahotera munzvimbo dzekushanya munyika yose akavhurirwa bhizinesi nevazhinji veavo vari kufunga kuvhara kusvika Gumiguru. Marisa akati izvi zvinongowedzera dambudziko rekushaikwa kwemabasa mubazi revashanyi. Parizvino, makumi mashanu neshanu muzana evashandi vepahotera havana mabasa, rakadaro Bhangi reThailand.